Soo dejisan Freemake Video Converter 4.1.10.109 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaFreemake Video Converter
Bogga rasmiga ah: Freemake Video Converter
Freemake Video Converter – software awood leh si loogu badalo files warbaahinta qaabab kala duwan. Software The kuu ogolaanayaa inaad haggaaji oo tayo leh, codec, baaxadda iyo meegaarka per heerka labaad halka qaadatay diinta files warbaahinta qaabab ay ka mid yihiin: FLV, Yaabka, MPEG, MP3, MP4, HTML5 iwm Freemake Video Converter u saamaxaaya in ay u badalaan faylasha qaabab kala duwan Qalabka telefoonada gacanta, ciyaaraha konsol, DVD iyo Blu-Ray. Software waxa ku jira qalab lagu sameeyo tafatir oo la dhisay-in ciyaaryahanka in ay taageertaa qaabab loo jecel yahay. Sidoo kale Freemake Video Converter kuu ogolaanaya in aad ka soo dejisan iyo geliyo files warbaahinta adeegyada video caan ah iyo shabakadaha bulshada.
Oo taageertay tiro badan oo qaabab
Kuweeda faylasha loogu talogalay qalabyada telefoonada kala duwan iyo ciyaaraha konsol
Degsado iyo uploading faylasha ka adeega oo caan ah
Soo dejisan Freemake Video Converter
Faallo ku saabsan Freemake Video Converter
Freemake Video Converter Xirfadaha la xiriira